10 Dugsiyada Farshaxanka ee Kanada oo leh Deeqo waxbarasho
Waa kuwan 10ka iskuulo farshaxan ee ugu sareeya Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho iyo noocyo kale oo kaalmo arday ah ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ahba.
Ma waxaad u haysaa xiise aan caadi ahayn xagga farshaxanka oo aad dooneysaa inaad horumariso xirfadahaaga ama xitaa aad ku sii wadato xirfad aad ku leedahay mid ka mid ah laamaha farshaxanka? Waa inaad dhigataa iskuul farshaxan oo kaa caawin doona inaad kobciso xirfadahan oo kaa dhigaya xirfadle.
Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay macluumaad buuxa oo ku saabsan iskuulada farshaxanka ee Kanada oo leh deeqo waxbarasho iyo kaalmooyin kale oo maaliyadeed labadaba muwaadiniinta iyo ardayda caalamiga ah ee lagu tababaro fanka.
Farshaxannimadu waa mid gabowday sida nin laf ahaantiisa u soo maray isbeddello badana wixii intaas ka dambeeyay welina way is beddeleysaa iyadoo ay ugu wacan tahay cilmi baaris ballaaran iyo baaritaan qoto dheer. Hindisaha tikniyoolajiyadaha dhijitaalka ah waxay si isku mid ah gacan uga geysteen kobcinta farshaxanka oo waxay fureen qaabab cusub oo farshaxan ah sida sawir qaadista, animation, qaabeynta ciyaarta, farshaxanka dhabta ah ee farshaxanka, iwm
Horaantii, waxaan qoray maqaal muujinaya iskuulada farshaxanka ugu fiican adduunka loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee aad fiirin karto.
Haddii diiradaadu aysan kaliya aheyn iskuulada farshaxanka laakiin iskuulada gudaha ama dibada ee deeqaha waxbarasho, waxaad fiirin kartaa liistadayada iskuulada caalamiga ah oo leh deeqo waxbarasho oo buuxda.
Kanada waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto adduunka, waxay leedahay heer dembi oo hooseeya, cimilo wanaagsan, iyo jawi deggan oo tayada waxbarashaduna waa tan ugu sarreysa, waana laga aqoonsan yahay adduunka. Iskuulada farshaxanka ee Kanada si wanaagsan ayaa loogu qalabeeyay tababarayaal tayo leh iyo kaabayaal si aad uga dhigto arday fanka ka wanaagsan.
Waxaan diyaariyey liistada iskuulada farshaxanka ugu fiican Kanada kuwaas oo bixiya deeqo waxbarasho iyo noocyo kale oo gargaar lacageed ah si ardayda looga caawiyo xagga dhaqaalaha loona dhiirrigeliyo inay noqdaan arday wanaagsan.
1 Dugsiyada Farshaxanka ee Kanada (oo leh Deeqo waxbarasho)
1.1 Jaamacadda farshaxanka ee Alberta
1.2 Jaamacadda Concordia, Kulliyadda Farshaxanka Fiican
1.3 Jaamacadda Farshaxanka & Naqshadeynta Emily Carr
1.4 George Brown College, Xarunta Farshaxanka & Naqshadeynta
1.5 Kuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee Nova Scotia
1.6 Kulliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta Ontario
1.7 Iskuulka Yukon ee Farshaxanka Muuqaalka
1.8 Kuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee New Brunswick
1.9 Iskuulka Fanka ee Ottawa
1.10 Kulliyadda Sheridan, Kulliyadda Animation, Farshaxanka iyo Naqshadeynta
Dugsiyada Farshaxanka ee Kanada (oo leh Deeqo waxbarasho)
Marka, ka dib baaritaan dheer oo ku saabsan dhammaan iskuulada farshaxanka ee Kanada, waxaan awooday inaan ururiyo 10 xarumo farshaxan oo leh deeqo waxbarasho oo laga heli karo Kanada.
Jaamacadda farshaxanka ee Alberta
Jaamacadda Concordia, Waaxda Farshaxanka Muuqaalka
Jaamacadda Farshaxanka & Naqshadeynta Emily Carr
George Brown College, Xarunta Farshaxanka & Naqshadeynta
Kuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee Nova Scotia
Kulliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta Ontario
Iskuulka Yukon ee Farshaxanka Muuqaalka
Kuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee New Brunswick
Iskuulka Fanka ee Ottawa
Kulliyadda Sheridan, Kulliyadda Animation, Farshaxanka iyo Naqshadeynta.
Waxaa la aasaasay 1926, Jaamacadda Farshaxanka Alberta waxaa loo yaqaanaa dugsiga ugu weyn ee farshaxanka ee Kanada, oo awood u leh kobcinta hal-abuurka iyo wadista hal-abuurka, AUArts waxay ku dhiirrigelisay kumanaan arday inay raacaan oo ay gaaraan himilooyinkooda farshaxanimo.
Si looga caawiyo ardayda sii, machadku wuxuu sanad walba siiyaa kaalmo lacageed sida deeqo waxbarasho, bursooyin, abaalmarino, iyo abaalmarino ka caawiya maalgalinta waxbarashadooda iyo riyadayda run ka dhigta
AUArts waxay bixisaa noocyo kala duwan oo abaalmarin ah oo sanadkiiba ay ku habboon yihiin ardayda caalamiga ah iyo kuwa Kanada si ay ugu weynaadaan qayb kasta oo farshaxan ah oo ay doortaan, sidoo kale waa muhiim inaad taqaanno noocyada abaalmarintan si aad u ogaan karto cidda aad codsanayso. Abaalmarintan ayaa kala ah;
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee gelitaanka waa nooc abaalmarin ah oo ay heli karaan AUArts freshers ama ardayda markii ugu horreysay markay soo gudbiyaan faylalka ay wataan isla markaana lagu abaal mariyo buundada waxbarashada.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee otomatiga ah waa nooc ka mid ah abaalmarinta deeqda waxbarasho ee aan u baahnayn ardaygu inuu dalbado halkii si toos ah loogu xusho iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda tacliimeed ee sanad-dugsiyeedkii hore ama mudnaanta shaqada ardayga.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waa nooca abaalmarinta ee looga baahan yahay ardayda inay buuxiyaan oo ay soo gudbiyaan foom codsi waxaana jira shuruudo gaar ah oo codsadayaashu u baahan yihiin inay lahaadaan ka hor inta aan la soo xulin kulliyadda ama guddiga abaalmarinta.
Bursarada waa abaalmarino la siiyo ardayda wajahaysa arrimaha dhaqaalaha.
Abaal waa abaalmarino la siiyo ardayda kuwaas oo noqon kara qaab buugaag, sahay, bilado, calaamado, diiwaangelinno, iyo shahaadooyin hadiyadeed.
Jaamacadda Concordia, Kulliyadda Farshaxanka Fiican
Kulliyaddu waxay ka badan tahay 3,800 arday oo ka diiwaangashan 60 barnaamijyo shahaadada koowaad iyo jaamacadeed ah jawi ka tarjumaya furfurnaanta iyo kala duwanaanta dhaqanka casriga ah, oo ka kooban cilmi-baarayaal caan ah, farshaxanno, iyo aqoonyahanno bixiya waxbarasho tayo leh una adeega astaan ​​dhiirrigelin iyo dhiirigelin ah ardayda.
Jaamacadda Concordia, kuliyada farshaxanka wanaagsan waa mid ka mid ah iskuulada farshaxanka sare ee Kanada. Waxay leedahay sagaal waaxood iyo afar xarumood oo cilmi-baaris heer sare ah oo ay ka go'an tahay inay ku milmaan teknoolojiyada cusub, warbaahinta soo jireenka ah, iyo dhaqanka farshaxanka wanaagsan ee taariikhiga ah.
Jaamacadu waxay kaloo siisaa deeqo waxbarasho ardayda si ay wax ugu bartaan mid kamid ah sagaalkan waaxood.
Machadku wuxuu leeyahay laba abaalmarin deeq waxbarasho oo loogu talagalay kuliyadda farshaxanka wanaagsan waxayna kala yihiin;
Deeqda-waxbarasho ee Heather Walker Memorial waxaa la aasaasey 1995 iyadoo ay dhigeyso kuliyada fanka farshaxanka iyada oo loo marayo tabarucaada asxaabta iyo asxaabta waxaana sanadkasta la siiyaa ardayda buuxda ama waqtiga-dhiman mid ka mid ah barnaamijyada lagu bixiyo Shineemo ama Sawir. Ku guuleystayaasha deeqdan waxbarasho waxaa lagu xushay iyadoo lagu saleynayo guulaha farshaxanka iyo tacliinta iyo u heellanaanta howlaha bani'aadamnimada.
Abaalmarinta Heather iyo Erin ee Bani'aadamnimada sidoo kale waxaa aasaasay 1995 kuliyada fanka farshaxanka iyada oo loo marayo tabarucaada asxaabta iyo asxaabta waxaana sanadkasta lasiiyaa arday buuxa ama waqti-dhiman ah oo kaqeyb gala Bachelor-ka fanka. Codsadeyaasha waxaa lagu xushaa adeegyadooda bani'aadamnimo, heer sare ee tacliimeed iyo farshaxanimo, iyo adeegyada bulshada.
FIIRO GAAR AH: Deeqaha waxaa loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad oo keliya
Waxaa la aasaasay 1925, Jaamacadda Emily Carr ee Farshaxanka iyo Naqshadeynta (ECUAD) waa mid ka mid ah iskuulada farshaxanka ugu fiican Kanada oo leh jawi waxbarasho oo raaxo leh oo loogu tala galay heer sare iyo hal-abuurnimo xagga farshaxanka aragga ah, farshaxanka warbaahinta, iyo naqshadeynta. ECUAD waxay ardayda siisaa barid tayo leh, labadaba ficil ahaan iyo aragti ahaanba, nooc kasta oo farshaxan ah oo ay ujeeddadiisu tahay inay bartaan ardayda waxaa laga dhigay xirfadlayaal ku takhasusay cilmigooda.
ECUAD waa iskuul caan ah oo farshaxanka kaa caawin doona ka arday ahaan inaad gaarto hadafkaaga farshaxanimo, sannadihii la soo dhaafay jaamacaddu waxay arday badan ka dhigtay inay fuliyaan riyadoodii iyada oo loo marayo qodobbada deeqda waxbarasho / deeqda lacageed ee sannadlaha ah ee ay ku habboon yihiin dhammaan ardayda.
ECUAD waxay siisaa tiro wanaagsan oo gargaar lacageed sanadle ah si loogu caawiyo ardayda waxayna kala yihiin;
Maalgelinta Ardayda Jaamacadeed waa nooc ka mid ah kaalmada maaliyadeed ee ardayda cusub, ardayda hadda dhigata, iyo ardayda qalin jabisa ee u qalmi kara kaalmada maalgelinta.
Deeqda waxbarasho ee soo-galo waxay ka kooban tahay ilaa toddobo abaalmarino kale oo deeq waxbarasho ah oo u furan ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba waxaana lagu abaalmariyaa ardayda cusub oo leh hanashada tacliin heer sare ah iyo kartida farshaxanimo. Deeqdani waxay dabooli doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah waxbarashada sanadka ugu horeeya.
Deeqda waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda qaab hoos u dhigid waxbarashadeed deyrta soo socota iyo xilli-dugsiyeedka guga waxayna leeyihiin in kabadan dersin deeqo waxbarasho oo ay heli karaan ardayda sannadka koowaad, labaad iyo saddexaad ee ka diiwaangashan 12 ama ka badan dhibcaha ECUAD. Kaliya ardayda haysa ugu yaraan CGPA ee 3.33 waqtiga codsiga (Maarso) ayaa xaq u leh inay codsadaan.
Deeqaha Dibadda Waxay noqon kartaa nooc kasta oo gargaar lacageed ah oo laga helo ilo dibadeed oo ka baxsan ECUAD oo ardayda laga yaabo inay helaan oo ay go'aansadaan inay ku isticmaalaan ECUAD.
Maalgelinta Ardayda Qalinjabinta waxaa la siiyaa arday ka qalin jabisay ECUAD oo loo aqoonsaday heer sare iyo karti farshaxan waxaana jira tiro ka mid ah deeqdan waxbarasho ee loo heli karo dalab.
Maalgelinta Ardayda Aborijiniska waa nooc ka mid ah kaalmada maaliyadeed ee loo daadiyay ardayda kaliya ee asalka ah taasoo qayb ka ah ballanqaadka dugsiga ee hubinta guusha waxbarashadooda.
Waxay kuxirantahay xarumo cilmi baaris farshaxan oo heer sare ah waxayna ku yaalliin bartamaha magaalo aad u kaladuwan oo firfircoon, George Brown College, Xarunta Farshaxanka iyo Naqshadeynta ayaa ah meesha aad ugu baahan tahay inaad wax ku barato si aad u hesho xirfado wax ku ool ah nooc kasta oo farshaxan / naqshad aad dooratay wuxuuna kuu diyaarinayaa safarka shaqada.
Iskuulku waa mid ka mid ah iskuulada farshaxanka ee ku yaal Kanada oo bixiya dhowr deeqo sanadle ah ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee doonaya inay qayb ka noqdaan machadkan farshaxanka caanka ah, deeqaha waxbarasho waa;
Dibloomada / Deeqaha Deeqaha. Soddon iyo kow deeq waxbarasho ayaa la siiyaa ardayda xaq u leh ee ku soo laabanaya dibloomaha buuxa ama barnaamijyada shahaadada. Si aad ugu qalanto arjiga deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay kaqeybqaataan nashaadaad wax ku biiriyay ardayda kale, waaxdooda tacliinta, ama dugsiga guud ahaan.
Sidoo kale, ardaygu waa inuu dhammaystiray ugu yaraan laba semestar oo isku xigxig ah oo daraasad ah uguyaraan CGPA of 3.5 kahor simistarka hadda.
Deeqaha Shahaadada waa abaalmarin loo heli karo ardayda soo noqonaysa ee xaqa u leh barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee buuxa. Codsaduhu waa inuu haystaa CGPA 3.5 oo uu si firfircoon uga qaybqaataa bulshada dugsiga.
Deeqaha waxbarasho ee EAP waxay ka kooban yihiin siddeed iyo toban deeq waxbarasho oo loo heli karo ardayda u soo noqota ee u qalma ardayda ESL-ka. Codsaduhu waa inuu ku dhammeeyaa ugu yaraan hal heer oo ah Ingiriisiga Ujeeddooyinka Tacliinta ee celcelis ahaan darajada A oo uu ka qaybqaatay nashaadaadyo wax ku taray ardayda kale, waaxdooda tacliimeed, ama dugsiga guud ahaan.
Deeqo waxbarasho oo dibedda laga maalgeliyo waa deeqda waxbarasho ee laga helo ilo dibadeed oo ka baxsan George Brown College, Xarunta Farshaxanka & Naqshadeynta waana seddex tiro ahaan oo kala ah; Kimokran Scholarship, Kaaliyaha-deeqda waxbarasho, iyo Woori Scholarship Scholarship. Si aad ugu qalanto, codsadayaashu waa inay haystaan ​​CGPA 3.3 oo ay si firfircoon uga qaybqaataan bulshada dugsiga.
Taariikh dheer oo farshaxanka lagu guuleysto oo ku taal magaalo xeebeed leh muuqaal farshaxan oo aad u kala duwan, Nova Scotia College of Art & Design (NSCAD) waxaa ka buuxa farshaxanno caalami ah oo la aqoonsan yahay, naqshadeeyayaasha, cilmi baarayaal, iyo aqoonyahanno ardayda bara xirfadaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah inay ku kobcaan jawiga iskuulka farshaxanka iyo wixii ka baxsan derbiyada dugsiga.
NSCAD waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda arrimaha maaliyadeed kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay wax ku bartaan dugsiga deeqdan waxbarashona waa la siiyaa sanadkiiba.
Si aad ugaqeyb gasho Deeqda Galitaanka, codsadayaashu waa inay codsadaan ugu dambeyn kama dambaysta ah ee Maarso 1 si otomaatig ah loo tixgeliyo. NSCAD waxay sidoo kale bixisaa in kabadan 90 deeqo waxbarasho oo gudaha ah iyo deeqo sanad dugsiyeed kasta oo loogu talagalay codsadayaasha guuleysta si ay ugu weynaadaan koorso kasta oo ay doortaan.
Waxaa la aasaasay 1876, Jaamacadda Ontario ee Farshaxanka & Naqshadeynta Jaamacadda waxaa loo tixgeliyaa inay tahay iskuulka ugu fiican farshaxanka Ontario Canada, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa dugsiga ugu da'da weyn Kanada ee farshaxanka, machadka ugu weyn uguna ballaaran ee farshaxanka iyo naqshadeynta.
Kulliyadda Ontario ee Farshaxanka & Naqshadeynta Jaamacadda (OCAD U) waxay u heellan tahay farshaxanka iyo naqshadeynta waxbarashada, ku celcelinta, iyo cilmi baarista noocyo kala duwan oo farsamooyin ah. Ardayda waxaa lagu qurxiyey barashada bilicsanaanta iyo farsamada oo ay weheliyaan cilmiyan, aragti, naqdin, iyo aqoon taariikheed iyo qaabab.
OCAD U waxaa si wanaagsan loogu fududeeyey kaabayaasha casriga ah ee ardayda si ay u sii sahamiyaan hal-abuurnimadooda, u sameeyaan cilmi baaris, iyo waxqabadyo kale. Hay'adani waa meesha ugu fiican ee aad ku noqon karto inaad ku horumariso awoodahaaga farshaxan oo aad ku gaarto hadafkaaga.
Si loogu dhiirrigeliyo ardayda inay qayb ka noqdaan OCAD U, machadku wuxuu sannad walba u fidiyaa kaalmo lacageed ardayda laga yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin dhaqaale.
Gargaarka lacageed ee ay bixiso OCAD U waa in lagu aqoonsado guusha ardayga waxaana la siiyaa sannad-ka-sannad barnaamij kasta oo weyn iyo heer sanadle ah oo ku saleysan buundooyin ama iyada oo loo marayo tartan juried, kaalmooyinkan ayaa ah;
Deeqo waxaa la siiyaa buundooyin waxbarasho ka hor bilowga sanadka soo socda, ardayda uma baahna inay codsadaan laakiin waxaa lagu dooran doonaa iyadoo lagu saleynayo heerkooda tacliimeed ee wanaagsan ee barnaamijkooda waxbarasho iyo deeqda waxbarasho waxay noqon kartaa hal mar ama dib loo cusbooneysiin karo iyadoo kuxiran ardayda .
Deeqaha waxaa la siiyaa heerarka 1aad, 2aad, iyo heerarka 3-aad ee Kulliyadaha Farshaxanka, Naqshadeynta, Farshaxanka & Sayniska Liberalka, iyo Iskuulka Daraasaadka Isku-dhafan.
Awards si isku mid ah u aqoonsadaan guusha waxbarasho ee ardayga iyo kartida farshaxanimo laakiin waxaa la siiyaa heerka 4-aad sida caadiga ah iyada oo loo marayo tartan juriye ah dhammaadka sannad dugsiyeed kasta waana abaalmarin lacageed.
Abaal waxaa lagu bixiyaa labadaba deeqda waxbarasho iyo barnaamijka abaalmarinta waxayna noqon kartaa qaab lacag ama aan lacag ahayn.
Waxaa la aasaasay 2007 loona yaqaanaa iskuulka ugu fiican waqooyiga Kanada ee farshaxanka farshaxanka, Yukon School of Visual Arts (SOVA) wuxuu leeyahay aragti ah inuu ku bixiyo waxbarasho farshaxan muuqaal oo firfircoon oo bulsho dhaqameed firfircoon. Yukon School of Arts Visual waa mid ka mid ah iskuulada ugu cusub fanka ee Kanada.
In kasta oo hay'ad cusub dugsigu aanu ku guuldareysan inuu fuliyo himilooyinkiisa iyada oo loo marayo ardaydiisa. Ardayda waxaa lagu diyaariyey xirfado wax ku ool ah iyo aragtiyeed si ay ula soo baxaan kartidooda farshaxanimo ayna ugu diyaargaroobaan safarka soo socda.
YSOVA waxay sanad walba u fidisaa kaalmooyin deeq waxbarasho ardayda doonaya inay ka mid noqdaan machadka laakiin ay ku jiraan dhibaatooyin dhaqaale. Codsaduhu waa inuu noqdaa arday waqti-buuxa ka diiwaangashan Barnaamijka Farshaxanka Muuqaalka iyo inuu ilaaliyo celceliska B ee xilliga dayrta.
Abaalmarinta Farshaxanka Muuqaalka ee WhiteHorse Motors: White Motors waa matoorrada rasmiga ee Ford ee u adeega WhiteHorse iyo aagga waana deeq-bixiyeyaal firfircoon iyo mutadawiciin bulshada ka tirsan oo bixiya abaalmarin $ 1000 ah arday dhigta waqti buuxa barnaamijka farshaxanka aragga ee YSOVA.
Waxaa la aasaasay 1938, New Brunswick College of Farshaxanka & Naqshadeynta ayaa ah hay'adda kaliya ee Canadian-ka ah ee diiradda saareysa farsamooyinka iyo naqshadeynta wanaagsan
Kulliyadda New Brunswick ee Farshaxanka & Naqshadeynta (NBCCD) waa mid ka mid ah iskuulada farshaxanka ee ugu wanaagsan Kanada oo bixiya barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan oo laga soo qaado istuudiyaha farsamada gacanta ilaa naqshadaha casriga ah ee casriga ah iyo sidoo kale Barnaamijka Farshaxanka Muuqaalka Aborijiniska.
NBCCD waxay bixisaa aasaas aad u fiican oo ku saabsan barashada xirfadeed, horumarka shaqsiyeed, kobcinta ganacsi hal abuur leh, waxaana lagu dalbaday inay wax ku bartaan farsamada gacanta iyo naqshadeynta u oggolaaneysa ardayda inay ogaadaan awooddooda hal abuur ee gaarka ah, u jeesashada hamiga ardayga, riyadiisa iyo hibooyinkiisa shaqo iyo sidoo kale qayb ka mid ah bulshada sii kordheysa ee farsamada gacanta iyo takhasusyada qaabeynta.
Kulliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee New Brunswick waxay siisaa kaalmo lacageed ardayda waqti-dhiman iyo kuwa waqtiga-buuxa ah ee raba inay wax ka bartaan xarunta, kaalmooyinkan ayaa ah;
Lacagta La Cusboonaysiiyay ee Lacagta Lagu Bixiyo waa nooc ka mid ah kaalmada maaliyadeed ee loogu talagalay inay ka caawiso ardayda dhibaatooyinka dhaqaale ee adag iyo codsade la xushay oo had iyo jeer ujeedkiisu yahay inuu wax ku barto NBCCD ayaa halkaas ku imaan kara daraasad.
Abaalmarinta Aasaaska Aasaasiga ee Beesha New Brunswick waxay taageertaa arday badan inta maalgelintu oggoshahay. Aasaasku wuxuu siiyaa deeqo waxbarasho, deeqo waxbarasho, iyo abaalmarin ardayda NBCCD si ay ugu weynaadaan goobta ay doorteen.
Sheila Hugh Mackay Foundation waa abaalmarin la siiyo arday ku jira Barnaamijka Tababbarka Istuudiyaha Sare oo muujiyey xirfado aad u fiican oo farshaxan ama naqshadeyn lehna diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah.
Xirfadaha Tababarka PETL iyo Horumarinta waa nooc ka mid ah kaalmada maaliyadeed ee la siiyo tiro la soo xulay oo arday ah oo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay barnaamijka Tababarka Xirfadaha iyo Horumarinta (TSD).
Waxaa lagu soo koobay tas-hiilaad farshaxan oo badan, Ottawa School of Art oo ah mid ka mid ah iskuulada ugu fiican farshaxanka ee Kanada waxay qabataa shaqo wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xirfadaha ardayda ee farshaxanka laga soo bilaabo dhalaanka ilaa marxaladda qaan-gaadhka waxayna ku habeeyaan sida loo wajaho nolosha bannaanka xerada.
Iskuulka farshaxanka Ottawa wuxuu bixiyaa maalgalinta deeqda waxbarasho, oo ay maal galiyaan shaqsiyaadka qaarkood, ardayda ujeedadoodu tahay inay ku sii wadaan riyadooda waxbarasho ee machadka iyo codsadayaasha la xushay waxay doortaan koorsada ay doorteen.
Kulliyadda Sheridan, Kulliyadda Animation, Farshaxanka iyo Naqshadeynta
Waxaa lagu aasaasay 1967 sidii iskuul farshaxan oo ku yaal Kanada oo ay weheliso qaab dhismeedkeeda hal abuurka - oo loogu talagalay inay ku siiso xalinta dhibaatada iyo qalabka fikirka muhiimka ah - iyo barnaamij qoto dheer oo lagu bixiyo guud ahaan hal abuurka, Sheridan College, Kuliyada Animation, Arts iyo Design waxay ardayda siisaa khibrad waxbarasho oo layaableh oo kuu diyaarinaysa shaqo iyo nolol.
Si loo sii caawiyo ardayda, machadku wuxuu siiyaa taxane ah fursado gargaar lacageed kuwa hadafkoodu yahay inay wax ku bartaan Sheridan, fursadahaani waa;
Deeqaha waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu saleynayo shuruudaha sida heer sare ee tacliimeed, ka qeyb qaadashada bulshada, xirfadaha hoggaamineed ee la muujiyey, iyo baahida dhaqaale.
Sheridan Degree Galitaanka Deeqaha waxay bixisaa abaalmarin deeq waxbarasho oo loogu talagalay codsadayaasha la xushay ee ugu weyn mid ka mid ah barnaamijyadeeda shahaadada.
Bixinta waxaa la siiyaa ardayda leh arrimo dhaqaale oo xoog leh laakiin doonaya inay wax ka bartaan Kuliyadda Sheridan, Kulliyadda Animation, Farshaxanka iyo Naqshadeynta.
Waxbarashada Awards Sheridan ayaa u soo bandhigtay ardayda muujisa waxqabadka akadeemiyadeed ee muuqda, ardayda waxaa soo magacaaba xubnahooda macalimiinta si ay ugu guuleystaan ​​abaalmarintan.
Halkaas, waxaad si buuxda u cusbooneysiisay faahfaahinta iskuulada farshaxanka sare ee Kanada oo leh deeqo waxbarasho oo hubaal ah inay horumariyaan oo ay sare u qaadaan awoodahaaga farshaxanimo, inay kaa fiicnaadaan waxaad waligaa jeclayd inaad ka qabato goobta farshaxanka, oo ay kugu tababarto xirfadaha loo baahan yahay in lala kulmo warshadaha hal-abuurka ah.
5 Jaamacadood oo ku yaal Kanada Fee Codsi la'aan Ardayda Caalamiga ah iyo Kuwa Gudaha
Top 15 Deeqaha aan la Xaqiijin ee Kanada
10 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada ee Sayniska Kombiyuutarka
Jaamacadda Farshaxanka Alberta | Deeqaha waxbarasho | Kharashka waxbarashada | Gelitaan | Codsiga
15 Dugsiyada Farshaxanka Ugu Fiican Dunida
Deeqaha Canadianka Deeq waxbarasho oo buuxa Deeq waxbarasho oo diblooma ah Cilmi-baaris iyo Wada-hawlgallo Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
Jaamacadda farshaxanka ee AlbertaDugsiyada Farshaxanka ee Kanadaiskuulada farshaxanka ee canada torontoDugsiyada Farshaxanka ee Kanada oo leh Deeqo waxbarashojaamacadaha farshaxanka ee torontoFarshaxanka iyo Naqshadeyntaiskuulada farshaxanka ugu fiican ee OntarioXarunta Farshaxanka & NaqshadeyntaJaamacadda ConcordiaJaamacadda Farshaxanka & Naqshadeynta Emily CarrKulliyadda AnimationFarshaxanka FarshaxankaKulanka George BrownKuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee New BrunswickKuliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta ee Nova ScotiaKulliyadda Farshaxanka & Naqshadeynta OntarioIskuulka Fanka ee OttawaKuliyadda SheridanIskuulka Yukon ee Farshaxanka Muuqaalka
Previous Post:7 Jaamacadaha ugu Xun Kanada
Post Next:5 Dugsiyada injineernimada ugufiican Kanada ee leh deeqaha waxbarasho
Pingback: Liiska Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarashada Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah 2021
Susan Ukpong wuxuu leeyahay,
December 14, 2020 at 10: 36 pm
Fadlan sidee baan ula wadaagi karaa mid ka mid ah kuwan si aan u caawiyo oo aan u taageero bulshadayda, aad baan ugu fiicanahay farsamada gacanta oo waxaan doonayaa in aan ka qayb qaato adeegga bulshada ee dugsiyada kala duwan ee Nigeria
March 17, 2021 at 4: am 53
Iskuulada farshaxanka ee halkan ku taxan waxay ku yaalliin Kanada, ma ahan Nigeria.
Nancynagy wuxuu leeyahay,
July 28, 2020 at 11: 27 pm
Nancy nagy kuliyadaha farshaxanka faneed waxay ku qaataan qiimo aad u badan Talyaaniga iyo Masar iyo jordan
Nancy naag wuxuu leeyahay,
July 28, 2020 at 11: 25 pm
Deeq waxbarasho oo canda ah oo ku saabsan naqshadeynta iyo farshaxanka iyo ka shaqeynta galleries Waxaan qiimo badan ka qaataa Talyaaniga iyo Jordan iyo Masar
amiir wuxuu leeyahay,
June 30, 2020 at 1: 26 pm
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo deeq waxbarasho oo loogu talagalay ARTS gudaha Kanada. Sideen u dalban karaa?
July 1, 2020 at 9: 56 pm
Waad codsan kartaa mid ka mid ah iskuulada kor ku xusan maadaama ay dhammaantood leeyihiin qodobo deeq waxbarasho ah
Anthony Tamale wuxuu leeyahay,
June 23, 2021 at 10: 10 pm
Waxaan ubaahanahay deeq waxbarasho oo Kanada ah oo ah shahaadada ART iyo DESIGN.